mari yemadhora exchange rates pasi rose. Dashboard yako pachako nebhajiro yemitengo, marati nekambani yekaseti yekusarudzwa kwekrisptocurrencies. 8818 digital mari real-time data.
USD - US dhora BTC - Bitcoin EUR - Euro GBP - paundi wakanaka JPY - Yen CNY - Currencykuva RUB - Russian Ruble AUD - Aussie dhora AZN - Azerbaijani manat ALL - Albanian naAmareki DZD - Algerian Dinar XCD - East Caribbean dhora AOA - Kwanza MOP - Macanese pataca ARS - Argentine Peso AMD - Armenian dram AWG - Aruban florin AFN - Afghan afghani BSD - Bahamian dhora BDT - Bangladesh kukurouka BBD - Barbados dhora BHD - Bahrain Dinar BYR - Belarusian Ruble BYN - Belarusian Ruble BZD - Belize dhora XOF - CFC Franc BMD - Bermuda dhora BGN - Bulgarian Lev BOB - Bolivian boliviano BAM - Bosnia and Herzegovina convertible chiratidzo BWP - Botswana pula ye BRL - Brazilian chaiyo BND - Brunei dhora SGD - Singapore dollar BIF - Burundi Franc BTN - Bhutan Dollar INR - Indian Rupee VUV - Vanuatu Vatu HUF - Hungarian Forint VEF - Venezuelan bolivar fuerte VND - Vietnamesse dong XAF - CFC Franc HTG - Haitian Lira GYD - Guyana dhora GMD - Gambian dalasi GHS - Ghana cedi GTQ - New Zealand yequetzal GNF - Guinea Franc GIP - Gibraltar paundi HKD - Hong Kong Dhora HNL - Honduran Lempira GEL - Georgian emalari DKK - Danish korona DJF - Djibouti Franc DOP - Dominican Peso EGP - Egyptian paundi ZMW - Zambian Kwacha MAD - Moroccan Dirham ZWD - Zimbabwean dollar ILS - Israeli shekeri itsva IDR - Indonesian Rupee JOD - Jordan Dinar IQD - Iraqi Dinar IRR - Iranian Rial ISK - Iceland Krone YER - Yemeni Rial CVE - Cape Verde shield KZT - Kazakhstani Tenge KYD - Cayman Islands Dhora KHR - Cambodian Riel CAD - Canadian dhora QAR - Qatari Riyal KES - Kenya shilling COP - WeColombia Peso KMF - Comoran Franc CDF - DzokuCongo Franc KPW - North Won Korean KRW - South Korean Won RSD - Serbian Dinar CRC - Costa Rica muura CUP - Cuban Peso KWD - Kuwaiti NZD - New Zealand Dhora KGS - Kyrgyzstani uko LAK - Lao Kip LVL - Latvian Lat LSL - loti ZAR - Rand LRD - Liberia dhora LBP - Lebanese paundi LYD - Libyan Dinar LTL - Lithuanian Rial CHF - Franc Swiss MUR - Mauritius Rupee MRO - Mauritanian Ouguiya MGA - Zimbabwe Dollar MKD - Macedonian raha MWK - Malawi Kwacha MYR - Malaysin Ringgit MVR - Maldivian rufiyaa MXN - Mexican Peso MZN - Mozambican metical MDL - VokuMoldova Leu MNT - Mongolian Vatu MMK - Burmese kyat NAD - Standard dhora NPR - Nepalese Rupee NGN - Malawi Kwacha ANG - Antilliaanse gulden NIO - ZvomuNicaragua Cordoba XPF - French Pacific Franc NOK - Norwegian Krone AED - Brazil Dirham OMR - Euro Rial SHP - Saint Helena paundi PKR - Pakistan Rupee PAB - Panamanian Balboa PGK - Kina PYG - guarani PEN - Peruvian Nuevo Sol PLN - Polish Zloty RWF - Rwandan Franc RON - Romanian Leu XDR - SDR (Special richiswedera kodzero) SVC - Zimbabwean muura WST - notes STD - Sao Zimbabwe Dollar SAR - Saudi Riyal SZL - lilangeni TRY - New Turkish Lira SCR - Seychelles Rupee SYP - Paundi Syrian SKK - Slovak they koruna SBD - Solomon Islands Dhora SOS - Somali shilling SDG - Sudanese paundi SRD - Zimbabwe dollar SLL - Leone TJS - Tajikistani somoni THB - Thai volt TWD - Taiwan itsva dhora TZS - Tanzania shilling TOP - pa`anga TTD - Trinidad uye Tobago dhora TND - Omani Dinar TMM - Turkmenistan manat TMT - Turkmenistan itsva manat UGX - Uganda shilling UZS - Uzbekistan Verengai UAH - Hryvnia UYU - Uruguayan Peso FJD - Fiji dhora PHP - Philippines Peso FKP - Falkland Islands paundi HRK - United Arab Emirates CZK - Czech they koruna CLP - Chilean Peso SEK - Swedish Krona LKR - Sri Lanka Rupee ERN - nakfa ETB - Ethiopian birr JMD - Jamaican dhora SSP - South Sudanese paundi CLF - Chilean Unidad of Fomento EEK - Estonian Kroon GGP - Guernsey paundi IMP - Manx paundi JEP - Jersey paundi MTL - Maltese Lira XAG - Troy paaunzi sirivha XAU - Troy paaunzi chendarama / Electronic goridhe) ZMK - Zambian Kwacha ZWL - Zimbabwe dollar ATS - YeAustria shilling AON - Zimbabwean itsva Kwanza BEF - YeBelgium Franc GRD - Greek yemadhirakema IEP - Irish paundi ESP - Spanish peseta ITL - Italian Lire CYP - Cyprus paundi DEM - Deutsche chiratidzo NLG - Netherlands guilder PTE - Portuguese shield SIT - Slovenian tolar SRG - Zimbabwe guilder FIM - Zenze mucherechedzo FRF - France Frank ECU - ECU YUM - Yugoslavian itsva Dinar
BTC = 42 221.48 USD
Bitcoin mutengo wemakesi
800 910 363 536.32 US dhora
+369 357 937.69 USD (+0.046139%)
ETH = 3 138.12 USD
376 320 345 312.15 US dhora
-7 143 548 758.08 USD (-1.86%)
XRP = 0.74 USD
35 642 208 666.94 US dhora
-734 847 879.53 USD (-2.02%)
Bitcoin Cash mutengo uri mupenyu chati
0 US dhora
EOS = 2.77 USD
EOS mutengo uri mupenyu chati
EOS mutengo wemakesi
2 785 892 823.09 US dhora
-74 551 443.91 USD (-2.61%)
Digital mari exchange rates worldwide. Nhasi mutengo weko weiyo chero digital mari.
Dhamari mari inoshandiswa muhutano online, real time value.
Digital money history charts. Dhidha mari yemari, mari yemadhinditi inokosha nhoroondo.
Kutarirwa pamari yemari yemari yemadhipatimendi: inonyanya kuvimbisa, itsva mitsva yakavimbika uye ine mari inobhadhara mari ikozvino.
Vose digital mari nevakashambadzirwa mutengo nhasi.
Vose digital mari nemutengo wavo wakanaka nhasi.
Vose digital mari nevana vavo vanoita zvekutengeserana uye yekutengeserana nhasi.
Digital mari exchange rate pane webhusaiti yedu inoratidza iye zvino mutengo weiyo chero yakasarudzwa mari yemadhora yanhasi. Cryptocur lwemari mitengo inoverengwa sevhareji kukosha kune ese misika yemisika munyika ino iyi digital mari inotengeswa nhasi. Iwe unogona kutevedzera mwero wekutsinhana wemari yemagetsi kuti uwane yakanakisa digital mari exchange rate yekutenga nekutengesa.
Iyo mitengo yekutengesa ye digital mari yenzvimbo yedu inogadziridzwa masekondi 30 ega ega. Dzidza mari yekutengesa crypto pamhepo mahara uye ikozvino munguva chaiyo.
Mutengo wekutsinhana kwe digital mari unotengeswa pane dzakasiyana-siyana crypto-exchanges uye crypto-misika. Kusiyana nemari yekirasi, hapana munhu anogadza chiyero chanhasi kana mangwana. Pane imwe neimwe digital mari yekutsinhana, iyo digital mari exchange rate inoshandura panguva dzakasiyana nguva. Kuti unzwisise zvakanyatso mwero wecrycurrency, ikozvino iwe unofanirwa kuverenga ipapo kukosha kwevhareji yeiyo chiyero chekuchinjana pamisika yese ye crypto.
Cryptoratesxe.com inoverenga pashoma nepakati kuwanda kweiyo digital mari exchange rate pamisika yose ye crypto.
Digital mari kuchinjana, pamhepo mitengo
Isu tinogara tichitarisa 8818 digital mari exchange rate pamisika yose yepasi rose.
Iwe unogona kutarisisa huwandu hwekutsinhana kwemumwe digital mari hama kune mumwe uchishandisa pachako nzvimbo. Iyo crypto rate inoratidzwa nenzira yemagirafu nenhamba, shanduko yezviyero inoratidzwa mumunda wakaparadzana muzana. Digital mari inokura uye digital mari kudonha inoratidzwa mune akasiyana mavara.
Iyo yakanakisa digital mari exchange rate.
Iyo yakanakisa digital mari yekutsinhanisa mitengo inogona kudzidziswa pane chati yekuchinja nekukasira muiyo digital mari chiyero pane saiti panels kana pane peji rekutsinhana peji rakasarudzwa digital mari online Kana iyo digital mari rate ichiratidza hushoma kukosha - ino ndiyo nguva yakanyanya kunaka yekutenga, uye kana digital mari yasvika pamwero wekutsinhana kukuru - ndiyo nguva yakanyanya kunaka yekutengeswa kwemari ye crypto.
Bitcoin mwero wekutsinhanha nhasi 19 Ndira 2022
I Bitcoin mwero wekutsinhanha nhasi ndiyo ruzivo rwekutanga runoshandiswa nevanhu vazhinji. Iwe unogona kutsvaga chiyero che Bitcoin yanhasi kune chero digital mari uye kune chero mari yenyika pane webhusaiti yedu.
Isu tinoratidza kuchinjanisa mitengo yema mari yemadhora zuva rega rega uye isu tinoziva chiyero kwete chechanhasi, asiwo chezuva rega rega.
Bitcoin digital mari exchange rate for mangwana 20/01/2022
I Bitcoin digital mari exchange rate for mangwana, 20/01/2022 inoumbwa neavhareji kukosha pazuva zvichibva pa Bitcoin kutengesa pamitengo yekutengesa nhasi. Mangwana e Bitcoin Kutsinhana cheki ndiyo huwandu hweiyo kuchinjanisa kwe Bitcoin panguva yekutsinhana pa 20/01/2022.
Nekudaro, nekutarisa shanduko ye Bitcoin pane kutsinhana pane webhusaiti yedu masikati, unogona kufanotaura chiyero che Bitcoin yenguva yemberi uye kuchinjana. mitengo ye Bitcoin panguva yekutsinhana pamhepo mangwana 20/01/2022.
Gadza iyo Bitcoin yekutevera peji pane peji guru recrycurrency exchange webhusaiti uye tarisa Bitcoin mwero pamhepo. Iwe uchagara uchifungidzira nenzira kwayo chiyero che Bitcoin yemangwana.
Mwero wekutsinhanisa we Bitcoin pamadhora nhasi
Bitcoin Kuti dhora yekuchinjana nhasi ndiyo huru Bitcoin Chiyero chekushandura pamusika wepasi rose. Iwo mwero wekutsinhanisa we Bitcoin kutarisana nedhora iro rinozivisa chiyero chekutsinhanisa che Bitcoin kutarisana nedzimwe mari.
Iwe unogona kuona chiyero che Bitcoin kune dhora pamhepo apa .
Mwero wekutsinhana we Bitcoin zvinopesana neiyo euro nhasi
Mari yekutsinhanha kwe Bitcoin kune iyo euro yanhasi zvakare kunounzwa pawebsite cryptoratesxe.com
Bitcoin Kuti Euro mwero wanhasi - chati ye Bitcoin mwero kuenda kuEuro paavhareji kwese kushambadzira kwemari ye crypto.
Bitcoin mwero wekutsinhana kupesana neiyo euro seimwe yemari mikuru pasi rose inosarudza Bitcoin Gengi rekutsinhana kutarisana nedzimwe nyika dzepasi rose. Track Bitcoin mwero wekutsinhanha nhasi pane dhibhodhi yepamhepo yewebhusaiti.
Mwero wekutsinhanisa we Ethereum pamadhora nhasi
Ethereum Kuti dhora yekuchinjana yanhasi - avhareji Ethereum huwandu hwekutsinhana izvozvi hwave kutengeswa mumusika wepasi rose we crypto. I Ethereum chiyero kune dhora inosarudza ye Ethereum mwero kune mamwe mari uye mari yemadhora.
Iwe unogona kuona chiyero che Ethereum kune dhora pamhepo apa .
Mwero wekutsinhana we Ethereum zvinopesana neiyo euro nhasi
Mari yekutsinhanha kwe Ethereum kune iyo euro yanhasi zvakare kunounzwa pawebsite cryptoratesxe.com
Ethereum Kuti Euro mwero wanhasi - chati ye Ethereum mwero kuenda kuEuro paavhareji kwese kushambadzira kwemari ye crypto.
I Ethereum mwero wekutsvagisa kune euro uye dhora semari huru yemari yepasi inomisa hwaro hwe Ethereum mwero wemari yose yenyika. Tevera Ethereum yanhasi mune epanternet yepamhepo webhusaiti yedu.
Mwero wekutsinhanisa we Litecoin pamadhora nhasi
Mari yekutsinhana Litecoin kune dhora nhasi - avhareji ye Litecoin ikozvino iri pakutengesa kweiyo crypto exchanges. Chiyero che Litecoin kune dhora inosarudza chiyero cha Litecoin kune dzakasiyana dzemari uye mari yemadhora.
Ona iyo Litecoin kusvika pamadhora ekutsinhanha online apa .
Mwero wekutsinhana we Litecoin zvinopesana neiyo euro nhasi
Mari yekutsinhanha Litecoin kusvika kuEuro nhasi yanoratidzwa pano pane yakakosha peji.
Litecoin mwero wekutsvagisa kune euro yanhasi - iyo yepamhepo Litecoin chiyero kune euro ndiyo yevhareji yekutsinhana kwe digital mari.
I Litecoin mwero wekutsvagisa kune euro uye dhora semari huru yemari yepasi inomisa hwaro hwe Litecoin mwero wemari yose yenyika. Tevera Litecoin yanhasi mune epanternet yepamhepo webhusaiti yedu.
Mwero wekutsinhanisa we XRP pamadhora nhasi
Munoona XRP chiyero kune dhora online .
I XRP mwero wekutsinhanha kusvika kudhora nhasi - avhareji XRP mwero parizvino mukutengeserana kwe crypto. I XRP mwero kune dhora inosarudza ye XRP mwero kune mamwe mimwe mari uye mari yemadhora.
Mwero wekutsinhana we XRP zvinopesana neiyo euro nhasi
Iyo XRP Kuti Euro kuchinjanisa mwero yanhasi inoratidzwa pane rakasiyana peji.
XRP mwero kune iyo euro yanhasi - iyo XRP chiyero kune iyo euro online ndiyo yevhareji pane digital mari exchanges.
I XRP mwero kune iyo euro uye dhora semari huru ndiyo hwaro hwe XRP mwero kune mamwe mamwe mari. Tevera iyo XRP mutengo wanhasi mumitengo yekutsinhana yemapuraneti ewebsite yedu online.